မြရွက်ဝေ: "တာနဘတ ပွဲတော်"
Posted by မြရွက်ဝေ at 11:00 PM
ဒီနေ့ ကျောင်းလစ်တယ်။ ပွဲတော် မသွားဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်လာတာ ကျေးဇူးနော်။ ဆုတောင်းစာတွေက အမျိုးမျိုး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပ။
ဲ "ယန်းသန်းသုံးရာထီ ပေါက်ပါစေ" ကျနော်လည်း အဲ့လိုဆုပဲတောင်းချင်တယ် :)
အမလည်းဆုတောင်းစာချိတ်ချင်တာ။ အမတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲဒီလို ပွဲမျိုးမရှိတော့ မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်.. အမကတော့ ရန်ကုန်က မိသားစုတွေ ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဖေနဲ့အမေပေါ့.. :) ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ပွဲတော်အကြောင်းလေး မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမလေးရေ...
ဒါနဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ရိုက်ထားတာ အမမြလားဗျး)
ကီမိုနိုဝတ်စုံအကြောင်းလေးလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် ရေးပါဦး သိချင်လို့ပါ
မဇနိ---> မဇနိရော ဘာများဆုတောင်းမှာပါလိမ့်! အင်းမ်... ကိုဇနိနဲ့ :P
မောင်မျိုး--->ယန်းသန်းသုံးရာထီပေါက်ရင် မောင်မျိုးတော့ ဘလော့မရေးတော့ဘဲ ဟန်းနီးမွန်းခရီးထွက်ပြီး ကမ္ဘာပတ်နေမယ်ထင်တယ်။ :)
မnu-san---> ဟုတ်တယ်အမရေ၊ မိဘကျန်းမာဖို့ဘဲ ဆုတောင်းတယ်။ ကျန်းကျန်းမာမာ အသက်တစ်ရာပေါ့။
တောင်ငူ---> နောင်နှစ်ကြုံရင် ချိတ်ပေးမယ်လေ။ ဘာဆုတောင်းချင်တာလဲ? ပုံထဲက အမပါ။ ဝတ်ထားတာ "ယူကတ"လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကီမိုနိုမဟုတ်ပါဘူး။ နွေရာသီမှာ ဝတ်ကြတဲ့ ချည်အပါးသား ဝတ်စုံပါ။ ကီမိုနိုတော့ မဝတ်ဖူးသေးဘူး။
like the kimono design!!!
its summer wear hoat?
thx for sharing so much about japan..cant wait to go there :P